Muxuu ka yiri tababare Solskjær barbarihii ay kula galeen Liverpool garoonka Old Trafford? – Gool FM
(Manchester) 20 Oct 2019. Tababaraha kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay sida uu kaga niyadjabsan yahay fursadii ay maanta kaga guuleysan lahaayeen Liverpool kulankii ay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford.
Red Devils ayaa laga dhaliyay gool waqti dambe ah ee yimid daqiiqadii 85-aad ee dhamaadka ciyaarta, taasoo ka dhigtay in kooxaha Man United iyo Liverpool ay dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1 ah kulankoodii 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha noqotee, Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa ciyaarta kadib wuxuu u sheegay saxaafada:
“Waan ku faraxsanahay waxa ay ciyaartoydu sameeyeen, waxay ku qasbeen taageerayaasha inay yimaadaan garoonka isla markaana ay soo bandhigaan kubadda cagta ee aad u wanaagsan, waxaan arkay in ciyaartoyda ay ku xumaayeen kaddib barbarihii ay la galeen Liverpool, taasina waa midaan raali ka ahay”.
“Liverpool cadaadis ayay na saartay dhamaadka qeybtii labaad, laakiin ma aysan abuurin fursado badan waxaana si fiican ula macaamilnay cadaadiskooda, balse waxaan luminay diirad saarida daqiiqadii uu naga dhashay goolka barbaraha”.
Tababaraha Liverpool ayaa ku dhaleeceeyay garsoore Martin Atkinson, qaladkii uu Viktor Lindelof ku galay Divock Origi, ka hor inta Man United uusan goolka u dhalinin Marcus Rashford.
Laakiin tababare Solskjær oo ka jawaab celinayay macalinka kooxda Liverpool ayaa wuxuu yiri:
“Ma ciyaareyno kubbadda koleyga, waxaa jirtay taabasho yar, laakiin taasi kama dhigna inuu jiray qalad cad, waxaan u maleynaa in garsooraha uu ahaa ninka ugu fiicnaa garoonka wuxuu ciyaarta u maamulay sida kulan Derby ah”.